Lubuntu: ny fomba fanovana kisarisary tampoka isaky ny fidirana | Ubunlog
Lubuntu Io no kinova maivana indrindra amin'ny Ubuntu, miorina amin'ny LXDE amin'ny maha birao azy ary miantefa amin'ireo mpampiasa izay tsy manana fitaovana vaovao akory nefa mbola maniry hanana tontolo milamina, tsotra ampiasaina sy havaozina, ary miaraka amina endrika mahomby mihoatra ny fahombiazana. Araka izany, tsy misy dikany ny fametrahana fitaovana marobe amin'ny asa tsy dia misy dikany fa mbola afaka maniry mafy isika, toy ny mpanakalo. temotra, satria manohitra izay tadiavina amin'ity 'tsiro Ubuntu' ity izy ireo.
Na izany aza, raha manolotra zavatra ny GNU / Linux dia manovaova izany ary fomba tsotra anaovana zavatra, ary eto dia hasehontsika ny fomba fananganana mpanova temotra ho an'ny Lubuntu amin'ny fomba tsotra, rehetra amin'ny alàlan'ny singa efa misy ao amin'ny rafitra ary noho izany, tsy mila mametraka fampiharana ho azy. Noho izany dia hialantsika ny fampiasana fitadidiana RAM 40 na 50 MB ho an'ity, ary indraindray mahita ny fiasa sasany ao ambadik'ity birao ity isika (tsy raharahiantsika fa maro amin'ireo fitaovana ireo no tsy mandeha amin'ny fomba milamina amin'ny PCManFM, mpitantana ny rakitra avy amin'i LXDE).
Ny zavatra voalohany hataontsika dia ny mamorona sary masina eo amin'ny birao, izay tsindrio havanana eo amin'ny birao ary fidio ny safidy Vaovao -> rakitra. Izahay dia manome azy ny anarana tonga ao an-tsaina, antoka fa raha ny extension dia .desktop, mba hahafahantsika mamorona zavatra toy izany 'wallpaper-changer.desktop'. Avy eo dia sokafanay ny rakitra ho fanitsiana miaraka amin'ny fitaovana tiantsika indrindra (raha ny Lubuntu, saika azo antoka fa Leafpad), ary ampianay ireto manaraka ireto:
Anarana = Random Wallpaper
Fanehoan-kevitra = Ovaina ho azy ny kisarisary.
Exec = bash -c 'pcmanfm -w «$ (find ~ / Images / Wallpapers -type f | shuf -n1)»'
Terminal = diso
Sokajy = Fampiasana;
Vato = temotra
Tehirizinay ilay rakitra ary izao ny ataonay dia ny maka tahaka azy io hanana toerana roa samy hafa: ny iray dia ao anaty fampirimana ampiasaintsika (mba hahafahany ho azo amin'ny alàlan'ny Lubuntu menu) ary ny iray kosa dia ilay ao amin'ilay fampirimana 'autostart', ka miaraka amn'ny rafitra no manomboka azy:
cd / birao
sudo mv wallpaper-changer.desktop / usr / fizarana / fampiharana
Ankehitriny dia mila manokatra ny menio preferences fidirana fotsiny isika, ary manamarina fa ny kisary mpanova ny rindrina dia voafantina (ny boaty eo akaikiny dia tsy maintsy misy marika fanamarihana) mba hampandehanana ny fikafika isaky ny miditra ao amin'ny Lubuntu. Izay ilay izy, manomboka izao dia hanana isika fitaovana iray izay hanova ny sary an-tsary ho antsika isaky ny manomboka ny session isika misafidy iray amin'ny kisendrasendra, ary raha te hanova azy isika, dia tsy maintsy miditra amin'ny menio fotsiny ary mifantina ny singa mpanova temotra, izay hanova ny sary an-drindrina amin'io fotoana io.
Araka ny hitantsika dia vahaolana tsotra be izy io izay tsy milaza akory ny fampiasana script sarotra na fampiharana fanampiny, zavatra iray izay voalazantsika tany am-piandohana dia ankasitrahana amin'ny tranga misy hazavana kely toy ny Lubuntu. Ny zavatra tokana tsy maintsy tadidintsika dia ilaina ny manaja ny fisian'ny fisie antsoina hoe folder ~ / Sary / Sary an-tsary ary apetraho eo ny sary rehetra izay hampiasainay ho valin-drihana, satria izao no fiasan'ny vahaolana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Lubuntu: ny fomba fanovana sary an-tsokosoko amin'ny fidirana rehetra
Ludwin dia hoy izy:
super, tsy maintsy ataoko izany
Ary tiako ho fantatra ny fomba fanovana ny ambadika ny terminal LXTeminal ahy
sanatria raha mampiasa lubuntu aho
Valiny tamin'i Ludwin
ary raha te-hametaka sary an-tsaina fotsiny aho?
Tsy haiko hoe maninona ny mpampianatra linux no te hanao sarotra foana izay tadiavin'ny tsirairay ho tsotra
Ampidiro ao amin'ny Ubuntu ny kinova vaovao an'ny kanelina sy MATE
Ahoana ny fametrahana VirtualBox 4.3.28 amin'ny Ubuntu